Soomaali dacwadoodii la diiday oo Amsterdam ka dhistay cooshado: Video
Dhowr qof oo isugu jira Soomaali, iyo Suudaan oo sharciga deganaanshaha dalka Holland loo diiday ayaa waxay guryo cooshado ka sameysan ay ka dhisteen Galbeedka cusub ee Magaalda Amsterdam oo lagu magacaabo Nieuw-West, halkaasoo nolol xun ku heysato (HALKAN RIIX SI AAD U DAAWATO).
Dadkaasi la diiday dacwadooda lana xeray feelashoodii Qaxootinimo ma haystaan wax suuli ah, waxayna ku saxaroodaan meel ay iyaga ku daboosheen cooshado, biyo, nalal iyo cuno, mana jirto wax ay ka sugaayaan Dowladda hoose.
Maamulka Neieuw West ee galbeedka Amsterdam ayaa ku guul dareystay iney wax ka qabtaan dhibaatada dadkaasi ku heysa halkaasi, waxayna sheegeen in aysan habayaraatee waxba u qaban karin dadkaasi u badan Soomaalida.
Guddoomiyaha qaybta magaalada Nieuw-West oo la yiraahdo Baadaa”uud ayaa sheegay in uu aad ugu xun yahay, wuxuuna yiri” ma doonaayo in qaxootiga rajo been ah la geliyo. Mushkiladdu waxay taallaa Den Haag” ayuu yiri oo uu ula jeeday in dad sidan oo kale ah ay buuxaan dad aan hoy heysan iney ku nool yihiin magaalada Denhaag.
Dadkan oo u badan Soomaaliya iyo Suudaan ayaa tiradooduna kor u dhaafeysaa 40 qof kuwaaso oo ilaa iyo toddobaadkii horena ku noolaa xero teendhooyin ka samaysan, waxayna cuno ka helayeen maalmihii la soo dhaafay dadka deriska la ah meesha ay ka dhisteen cooshadaha iyo hey’adda caawisa qaxootiga ee la yiraahdo vluchtelingenwerk xili la guda galay qaboowaha Yurub.